CARRUUR KA KALLUUMEYSATA XEEBTA BOOSAASO |
somalipublic / August 8, 2016
Carruur weli ku jirta xilligii waxbarashada ayaa subax kasta u shaqo taga xeebta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari si ay uga kalluumeystaan. Carruurtan oo ay da’doodu u dhaxeyso 11 jir ilaa 14 jir oo tiradooda ay gaarayso 35 qof ayaa isugu jira agoon, qaar ka soo jeeda qoysas soo barakacay iyo kuwo sabool ah.
Carruurtan waa xubnaha keliya ee qoysaskooda u shaqeeya. Maxamed Sharma’arke oo 14 jir ah wuxuu kalluumeysiga billaabay labo sano ka hor, markaas oo uu shaqada ka bartay, kalana wareegay aabbihiis oo dhintay. Wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay in uu subax kasta raaco doon yar oo nooca kalluumeysiga ah oo uu leeyahay nin ay saaxiibbo yihiin. Shaqada oo maalinta ugu fiican uu ka helo Sh.so 300,000 wuxuu ka bixiyaa biilka qoyska oo ka kooban 5 qof iyo waxbarashada labo wiil oo ka yaryar oo dhigta dugsi hoose.
Maxamed Cabdi Cismaan oo ah guddoomiyaha Iskaashatada Kalluumeysatada gobolka Bari ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in shaqada kalluumeysiga ay halis ku tahay carruurta yaryar ee aan u tababarneyn. Laakiin maaddaama ay soo badanayaan carruurta xirfaddaas ku shaqeysaneysa ay tababarro u furi doonaan si ay isu badbaadiyaan haddii ay halis la kulmaan.
Yaasiin Cabdi oo 13 jir ah wuxuu xusay in kalluunka yaryar ee uu soo dabto laga siisto Sh.so 30,000, noocyada waaweyna Sh.so 100,000, lacagtaas oo ah masruufka keliya ee qoyskiisa uu helo. Meelo fogfog ayuu mararka qaar doonyada u raacaa oo uu ka soo kalluumeystaa, wuxuuna biyaha ku jiraa in ku dhow 10 saacadood. “Kama cabsado badda, maxaa yeelay dabaal baan aqaannaa,” ayuu yiri Yaasiin oo agoon ah.
Kalluumeysiga waa shaqo adag oo mararka qaar u baahan xoog iyo inuu qofku yaqaanno dabaal. Ayaanle Khamiis Xaamud oo 40 jir ah, kana mid ah kalluumeysatada ay carruurta doonyaha la raacaan ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in ay dhowr jeer badbaadiyeen carruur badda ku dhacday. “Mararka qaar kuwo waxaa jira doonta ka dhaca annaga oo meel fog joogna. Way sigtaan oo naftooda halis bay gashaa, laakiin inta badan waan ka warheynaa, waana ku dhiirrigelinnaa shaqada.”
← INDHO-FIIQIS LACAG LA’AAN AH OO KA SOCOTA ISBITAALKA BUUHOODLE
Ra’iisul wasaaraha iyo masuuliyiin kale oo Muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweynaha Galmudug →